कंगना रनौतलाई ‘वाई’ श्रेणीको सुरक्षा दिनेछ मोदी सरकार,के हो वाई श्रेणीको सुरक्षा ? – ramechhapkhabar.com
कंगना रनौतलाई ‘वाई’ श्रेणीको सुरक्षा दिनेछ मोदी सरकार,के हो वाई श्रेणीको सुरक्षा ?
भारतको केन्द्र सरकारले बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौतलाई वाई लेभलको सुरक्षा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
केहि दिन अघि सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्युपछि कंगनाले उनी मुम्बईमा आफूललाई सुरक्षित महसुस नगरिरहेको बताएकी थिइन् ।
केन्द्र सरकारको तर्फबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि कंगनाले ट्वीटरमा देशका गृहमन्त्री अमित शाहलाई धन्यवाद दिएकी छिन् ।
कंगनाले भनिन्, ‘यो प्रमाण हो कि अब कुनै देशभक्त आवाजलाई कुनै फासीवादीले कुल्चन सक्दैन । म अमित शाहजी प्रति आभारी छु । उनले चाहेको भए मलाई केही दिन पछि मुम्बई आउने सल्लाह दिन्थे तर उनले भारतकी एक छोरीको वचनको मान राखे, हाम्रो स्वाभिमान र आत्मसम्मानको लाज राखे, जय हिंद ।’
केन्द्र सरकारको यो निर्णय शिवसेना सांसद संजय राउत र कंगनाबीच चलिरहेको तिक्ततायुक्त बयानबाजीबीच आएको हो ।
के हो वाई श्रेणीको सुरक्षा ?
भारतमा नेता वा ठूला व्यक्तित्वलाई साधारणतया जेड प्लस, जेड, वाई र एक्स श्रेणीको सुरक्षा प्रदान गरिन्छ । यसमा केन्द्रीय मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस, चर्चित नेता र वरिष्ठ अधिकारी समावेश हुन्छन् ।
जेड श्रेणीको सुरक्षामा सुरक्षाकर्मीको संख्या २२ हुन्छ । यो श्रेणीमा आइटीबीपी (इन्डो–तिब्बती बोर्डर पुलिस) र सिआरपीएफ (केन्द्र रिजर्व पुलिस बल) का जवान र आधिकारी सुरक्षामा लागेका हुन्छ । यो श्रेणीको सुरक्षामा एस्कोर्टस् र पाइलट वाहन पनि दिइन्छ ।
जबकी वाई श्रेणीमा ११ जना सुरक्षाकर्मी हुन्छन् । यसमा दुई पर्सनल सिक्योरिटी अफिसर्स (पिएसओ) समावेश हुन्छन् ।
एक्स श्रेणीमा २ सुरक्षाकर्मी तैनाथ हुन्छन् जसमा एक पिएसओ समावेश हुन्छन् ।